Ithegi: ukupapashwa kwidijithali | Martech Zone
Maka: upapasho lwedijithali
Lwesine, Okthobha 3, 2013 NgoLwesihlanu, Septemba 26, 2014 Douglas Karr
I-beta yeLucidpress yindawo esekwe kwiwebhu, isixhobo sokudonsa kunye nolahlo sokuprinta kunye nokushicilela kwidijithali. Insiza ivumela nabani na ukuba enze ngokulula umxholo ojonge ukuprinta okanye iwebhu, kwaye inokusetyenziswa kwishishini okanye kubume bendawo. Apho isoftware yedesktop ishiye ngasemva kwezinto ezintsha zentengiso eguqukileyo, sibona ikamva elicacileyo ngezicelo ezisekwe kwiwebhu. NgeLucidpress, injongo yethu kukwenza kube lula nakubani na ukuba enze umxholo omangalisayo njengoyilo
5 Kufuneka-Jonga imizekelo yokuPapasha ngeDijithali
NgoLwesithathu, Septemba 19, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kudala sizama umxhasi wethu, iZmags, zabanye abathengi kwaye umbukeli wabo upholile kakhulu. Ndifuna ukubonisa eminye yemizekelo, yento endiyikholelwayo, zezinye iinkqubo ezisebenzisanayo zedijithali ezisebenzisanayo! Ukuvula umbukeli, cofa nje kwi-skrini yombukeli! Abathengi beZmags Commerce Pro imveliso babona iziphumo ezintle, kubandakanya ukonyuka kwe-5x kwimbono yephepha, ixesha elingu-2x elichithwe kwindawo, ukuya kuthi ga kwi-2x yokuphakamisa amaxabiso okuguqula kunye
NgoLwesithathu, Septemba 5, 2012 NgoLwesine, Septemba 6, 2012 Douglas Karr
Umxhasi wethu we-Ecommerce, iZmags, ukhuphe umbukeli omtsha wopapasho lwedijithali. I-Verge ™ ivumela iinkampani ukuba ziguqule iiPDF zazo (kunye nomnye umxholo) zibe ngumbukeli apho zinokuthi zigqume idatha, imifanekiso, ividiyo, kunye neqonga labo le-ecommerce. Umbukeli unokusasazwa kwidesktop, iselfowuni kunye nethebhulethi ngeqonga lolawulo olulula. Oku kukuqhubela phambili kupapasho lwedijithali, ukuvumela iinkampani ukuba zakhe amava asebenzisanayo kunye nokuzibandakanya apho banokuthengisa ngokuthe ngqo. Mandulo,